TIPS: 28 dhar fudud oo dhar ah oo aad isku dayeyso - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » VIDEOS TIPS: 28 dharka dharka fudud ee aad isku dayeyso
TIPS: 28 dharka dharka fudud ee aad isku dayeyso
NASASHADA DIYSIGA KA HELI KARAA SAWIRADAADA
Haddii aad ku riyoonayso inaad noqoto naqshadeeye fashion, waxaanu kuu soo jeedinaynaa inaad bilowdo dib-u-habeynta xidhxidhkaaga! Waxaad ka heli doontaa fikrado badan oo ku saabsan dib u habaynta dharka gaboobay iyo inaad abuurto wax aad u fiican. Ha iska tuurin dharkaaga, way fududahay in la abuuro wax cusub oo lacag badan lagu badbaadiyo. Intaa waxaa dheer, dib u warshadaynta waa habka lagu keydiyo dabeecadda.
Aynu aragnay fikradaha dharka qaboobaha:
- Ka boodi gabowgii hore iyo kan wakhti dheer ee saaxiibkiina oo gooyee! Maya, ma aha kaftan! Waxaad baran doontaa sida loo leexiyo hoodie oo ku haboon suunka cayaaraha qaboobaha leh dusha sare iyo garbaar. Qaado maqaarkaaga oo iyaga ku jara!
- Jeex jeexnaantaada jilicsan oo la soco barashada talaabo-tallaabo
- Raadi sida loo yareeyo jaangooyooyinka dhab ahaantii daqiiqado 1
- Ku dhaji faashadaha dillaacsan ee jajaban. Hadda, flop flip-kaaga ayaa u muuqda mid xariif ah!
- Si fudud u jooji joornaaladaada hore ee bacaha dukaanka raaxo leh
- Kursigaaga muraayadda albaabada u laabo xirmada dharka aad u fiican ee safarka
- Waxaan wadaagnaa sida loo sameeyo shukumaan qaas ah. Waxaad samayn kartaa naqshad aad adigu leedahay nadiifiye. Sidoo kale waa mashruuc shakhsiyadeed oo habboon oo loogu talagalay marti-gelinta dhalashada. Waxaad u baahan doontaa inaad sameysid daabacado ama waraaqo leh kartoon oo aad isticmaasho bleach. Fiiri casharka dhammeystiran!
- Iska ilaali dhididka dhididka ee cadarkaaga cad oo isticmaalaya liin
- Baro sida aad u dhaqaajinayso dharkaagii hore
- Ha iibsan jaakad cusub, waxaad ku sameeyn kartaa jeeerkii hore
- Miisaankaaga ayaa sidoo kale fursad u leh inuu ku noolaado noloshooda labaad ... sida!
- Raadi fikrado kala duwan si dib loogu habeeyo taararkaaga hore
- Muraayadaada hore ku celi quraarad qurux badan
Ha iloowin inaad ku biirtid channelkayaga fikrado aad uwanaagsan!
00: 51 Jooji dhididkaagii hore
01: 51 DIY Denim Skirt
04: 37 DIY bacda wax iibsiga
08: 40 Qalabka dharka ee DIY
25: 28 Superb dheelitir xisbi
Ku soo dhawow gacmo-dhaqashada 5 GIRLY: https://goo.gl/fWbJqz
Tani waxay u muuqatay mid hore https://www.youtube.com/watch?v=bt9XLW3tGPE
SAFE KOI SA XADGUDUB - HALKAN KA DAAWEYN QAADASHADA GO
Xilliga Pakgne 3 ... Poupi iyo aabihii saaxiibkiis - halkan videoka